Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Excellency Mr. Alexander Lukashenko, President of the Republic of Belarus – Ministry of Foreign Affairs
Ambassador of Myanmar presents his Credentials to His Excellency Mr. Alexander Lukashenko, President of the Republic of Belarus
U Tin Yu, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to the Republic of Belarus, presented his Credentials to His Excellency Mr. Alexander Lukashenko, President of the Republic of Belarus, on 16 December 2013, in Minsk.
Dated. 20 December 2013
သ တင်း ထုတ် ြပန်ချက်
ဘယ်လာရုစ်သမ္မတနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စု သမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီး ဦးတင်ယုသည် ၎င်း၏ ခန့်အပ်လွှာကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် မင့်စ်မြို့၌ ဘယ်လာရုစ်သမ္မတနိုင်ငံ၊ သမ္မတ မစ္စတာ အလက်ဇန္ဒား လူကာရှန်ကို ထံ ပေးအပ်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
နေ ပြည် တော်
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀ ရက်